Umshini Wokubopha Ibhodlela - Micvd.com
Kunoma iluphi ulayini wokufaka uketshezi, ukuba nemishini ethembekile ye-cap kubalulekile. Le mishini iqinisekisa ukuthi ngemuva kokuthi amabhodlela enqamula esiteshini se-filler yesitsha, abekwa uphawu ngokuphelele futhi alungiselelwe isinyathelo esilandelayo soxhaxha lokukhiqiza, noma ngabe lokho kusho ukuthengisa kumhambisi, ukuthengisa ngqo kwikhasimende, noma ngenye indlela. Usebenzisa i-capper yebhodlela kusuka NPACK kuzosiza ukuqedela umugqa wakho wokupakisha futhi kuzosiza ekuqinisekiseni ukuthi imikhiqizo oyithengisayo ihlanganiswa ngendlela esezingeni eliphezulu.
Esinokwethenjelwa, Izisetshenziswa Zekhwalithi Yokubopha Ibhodlela
Imishini esebenza ngokufanelekile yokufaka amabhodlela ibalulekile ezinhlelweni zokufaka uketshezi. Ngokuya ngohlobo lwamakhethini umkhiqizo owadingayo, izinhlobo ezahlukene zemishini yokufaka i-ciling izobandakanyeka kwinqubo yokwenza i-ciling, kufaka phakathi imishini yokuthola i-ciling. NPACK uphatha izinhlobo eziningi zemishini yamabhodlela e-capping emigqeni yokufaka.
Ukuqopha Amabhodlela Ngokuphumelelayo Nemishini YeCapper Ethembekile
Kunezinhlobo eziningi zemikhiqizo engazisebenzisa NPACK imishini yokusebenzisa ibhodlela. Faka izigqoko kosayizi abahlukahlukene kanye nobukhulu bemabhodlela aqukethe:
Acids kanye corrosives
Ukudla okunetshezi nososo
Ungahlanganisa imishini ehlukene yokuphamba ukwandisa ukusebenza kahle komugqa wakho wokupakisha. Futhi singanikeza ukuqeqeshwa kanye nezinye izinsizakalo zasensimini ukusiza abasebenzi ukuthi basebenze ngempumelelo futhi bagcine ucezu ngalunye lomsebenzi.
Ukuze ufunde kabanzi nganoma imiphi imishini esiyithengisayo, zizwe ukhululekile Xhumana nathi noma nini.
Umshini we-Spindle Caps Machine ozenzakalelayo
NPACK umshini wokuphamba we-spindle ulungele ama-spindle screw cap, ikhiwane elihluthulelwe, kanye neziphuzo zokufafaza nokunye. Izindondo zingaba zensimbi, zepulasitiki.
IGAMA IMODEL Umshini wokukopisha i-NP-LC Full automatic spindle capping
Umthamo 0 ~ 200b / m （ngaphansi kwamabhodlela nosayizi we-cap）
Ibhodlela kanye nobubanzi be-cap Φ20 ～ 120
Ubukhulu beBhodlela 40 ~ 350mm
Ubukhulu bemishini yomshini wokulinganisa L1060 * W896 * H1620mm
Uhlelo lweCap feed Isondli se-elevator Ukupholisa nge-Vibrator
Dimension I-L880 × i-W1000 × i-H2600mm 800 × 600 × 1700mm
Sisebenzisa imodi 'yesilawuli esisodwa semoto', engaqinisekisa ukuthi umshini usebenza kahle futhi ugcine i-torque engaguquguquki ngaphansi kwesimo sokusebenza sesikhathi eside.
Amabhande wokupholisa angashintshwa ngokuhlukile, okuvumela ukuthi umshini ulungele amabhodlela we-capping anobude obuhlukahlukene nobukhulu.
Uma ukhetha uhlelo ongaluthatha lokuqondisa ngokuhambisana nomshini, luzobe lwanele nakuma-pump cap.
Uhlelo olusebenzayo lokulungisa ukwakhiwa lufakwe umbusi oqondile kanye nekhawunta.
Igama eliyinhloko lingaphakanyiswa futhi lehle ngokuzenzakalelayo ngemoto.
Umshini wokuCwenga we-Rotary ozenzakalelayo
Umshini we-Npack automatic rotary ciling (uphawu) wokukhiqiza uwumkhiqizo omusha, owakhiwa yinkampani yethu eminyakeni edlule Uxhobisela ipuleti yokubeka indawo yokugijima, ehlanganiswe amakhanda aphindaphindwe kabili omjikelezo. Umshini unokusebenziseka emkhakheni wezemithi, wokubulala izinambuzane, wamakhemikhali, wokudla njll. Kungamathuluzi wangempela webhodlela, futhi kufakwa kwi-aluminium cap, the ft proof cap, screw-thread cap, ROPP cap njll.
Qaphela: lo mshini ulungele ukufaka i-screw capping kuwo womabili ama-cap kapulasitiki noma ama-cap aluminium uma ushintsha amakhanda we-capping.
Umshini wokufaka othomathikhi we-NP-PC wenzelwe ukuvala izinhlobo ezahlukahlukene zeziqukathi (ezenziwe ngopulasitiki, ingilazi nensimbi) ngesikulufa, cindezela-on kanye ne-pilfer proof caps, ROPP caps. Umshini ulungele ikakhulukazi ukusetshenziswa ezimbonini zokucubungula ukudla, izimonyo namakhemikhali.
2.Umshini ungafakelwa izinhlobo ezahlukahlukene ze-cap unscrambler (isixwayisi, i-rotary, uhlobo lwebhande) kuye ngohlobo nosayizi wekepisi. Okondla amakepisi ku-cap unscrambler i-caps hopper iyatholakala.
3.Ngokufaka izigaxa ezinzima entanyeni yesitsha uhlelo lwe- "Khetha Nendawo" lungasetshenziswa.
Iziqukathi zidluliselwa esondweni lezinkanyezi ngomthuthi. Isondo lezinkanyezi (uhlobo lokukhomba i-capper yekhanda elilodwa noma ukunyakaza okuqhubekayo kwe-capper enamakhanda amaningi) luthatha iziqukathi luzihambise esiteshini esibeka amakepisi kunasekhanda lokuvala. Ikhanda lokuvala liqinisa ikepisi nge-torque edingekayo (uma ikhanda lolohlobo lwengcindezi, lizocindezela ikepisi entanyeni yebhodlela ngentambo yasentwasahlobo). I-torque ingasethwa ekhanda lokuvala nge-clutch kazibuthe. Ngemuva kokuphothulwa kwenqubo yokuvala, isondo lenkanyezi lihambisa isitsha esiteshini esilandelayo ukucindezela ikepisi elincane elimnyama, ngemuva kwalokho isondo lenkanyezi lihambisa isitsha kumdlulisi wemikhiqizo yokuqeda.
imodeli I-NP-PC-1 I-NP-PC-2
Umthamo 1800-3000 b / h 3000-4800 b / h
I-cap efanelekayo I-screw caper, i-snap capper, i-aluminium cap, i-ROPP cap
Khiqiza cap 99%
Ikhanda lokushaya 1 2
Cindezela ikhanda 1 2
Power ukusetshenziswa 0.75KW 1.5KW
Isisindo (kg) 600kgs 700kgs